Mogadishu Journal » 2019 » November » 8
Mjournal :-Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Itoobiya Dr. Workneh Gabeyehu ayaa si rasmi ah shalay ula wareegay xilka Xoghayaha Guud ee Urur Goboleedka IGAD. Munaasabad ka dhacday dalka Jabuuti oo xarun u ah Xogheynta IGAD ayaa Maxbuub Macalin oo u dhashay dalka Kenya ku...
Mjournal :-Sida uu qoray wargeyska the star eek a soo baxa dalka Kenya seddax garsoore oo gacanta loo geliyay inay xugmiyaan wax loogu yeeray muranka badeed ee Kenya iyo Somalia ayaa sheegay inaysan xukunkooda ridi Karin dhaqaale xumo awgeed. Kanyi Kimondo, Robert Limo iyo...
Mjournal :-Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa baraha Bulshada ku sheegtay in fatahaadihii dhowaan ka dhacay qeybo ka mid ah Dalka Soomaaliya ay ku dhinteen 25 Qof, halka 47 kalena ay ku dhaawacmeen, xilli ay Roobab culus ay ka da’ayaan meelo ka mid ah Dalka. Hay’adda...
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Caawa u ambabaxay Dalka South Africa Gaar ahaan Magaalada Durban Halkaasi oo uu uga Qeyb gali Doono Shirka Global Parliament of Mayors (GPM). Cumar Maxamuud...
Mjournal :-Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa Saacadihii lasoo dhaafay ku kala saxeexday Magaalada Muqdisho heshiis lagu fulinayo mashaariic kala duwan oo uu ku baxayo dhaqaale gaaraya 3 Milyan oo Euro. Wasiirka Wasaaradda Caafimadka Soomaaliya Drs; Fowsiiya Abiikar Nuur oo...
Mjournal :-Maleeshiyaad la sheegay inay ku hubeysnaayeen Qoryaha AK47 ayaa xalay waxaa ay tiro dad Shacab ahaa ku dileen Maqaaxi ku taalla Xaafad ka tirsan degmada Kaxda ee Gobolkan Banaadir, iyaga oo intaasi kadib goobta ka baxsaday. Ragga hubeysan ayaa rasaas ku furay dadka...